A tọhapụrụ Ubuntu Touch OTA-17 ma na-aga Ubuntu 20.04 | Site na Linux
A tọhapụrụ Ubuntu Touch OTA-17 ma na-aga Ubuntu 20.04
Ọrụ ahụ UBports mara ọkwa na mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke Ubuntu Touch OTA-17 nke e mere ọtụtụ usoro mmelite na ndozi dị mkpa, ebe ọ bụ na nke a abụghị naanị na-eme ka ndozi ndozi na-aga n'ihu, kamakwa ọ na-eme ka usoro ahụ dịkwuo mma.
Maka ndị na-amatabeghị Ubuntu Touch, ị kwesịrị ịma na nke a bụ nkesa igwe eji agagharị na mbụ nke Canonical mepụtara nke mechara wepụta ma banye n'aka ọrụ UBports.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Ubuntu Touch OTA-17?
2 Nweta Ubuntu Touch OTA-17
Kedu ihe ọhụrụ na Ubuntu Touch OTA-17?
Versiondị Ubuntu Touch ọhụrụ a OTA-17 ka dabere na Ubuntu 16.04, mana ndị mmepe lekwasị anya n'oge na-adịbeghị anya jikere ịkwaga Ubuntu 20.04.
Dị ka ekwere na OTA-16 tọhapụ post, mwepụta a bụ ebe anyị na-akwụsịtụ ntakịrị. Anyị na-agbasi mbọ ike iwetara gị Ubuntu Touch nke dabeere na Ubuntu 20.04. Ebe ọ bụ na ọtụtụ oge anyị ejirila na Ubuntu 20.04, enwere obere oge iji nyochaa ma jikọta ndozi na atụmatụ ọhụrụ maka ịhapụ OTA oge.
Ihe ohuru nke OTA-17 gụnyere Mir ihe nkesa ngosi mmelite na mbipute 1.8.1 (mbipute 1.2.0 eji n’elu) na mmejuputa nkwado NFC na ọtụtụ ngwaọrụ izizi ejiri ngwa gam akporo 9, dị ka Pixel 3a na ekwentị Volla.
Uzo ozo gbanwere na ohuru Ubuntu Touch bu nke a ugbu a na-akwado NFC ngwaike na ọtụtụ ngwaọrụ Ha na ngwanrọ ngwaike na Android 9 na-agba ọsọ, gụnyere Pixel 3a na ekwentị Volla.
Nkwado NFC na-enye ndị mmepe ngwa ikike ịgụ ma ọ bụ ide mkpado NFC; ma ọ bụ ọbụna iji protocol na-ekwurịta okwu. Ndị mmadụ adịworị na-eche echiche banyere otu esi eji ọrụ NFC agụ site na ndị nlekọta ahụike na-enweghị atụ
Ọtụtụ ngwaọrụ dakọtara, tinyere OnePlus One smartphone, edozila nsogbu igwefoto metụtara flash, mbugharị, ntụgharị, na elekwasị anya.
Na ngwaọrụ OnePlus 3, a na-ahazi arịa ndị ahụ iji rụọ ọrụ desktọọpụ nkịtị site na iji njikwa ngwa Libertine.
Pixel 3a agbanweela ọgbọ nke thumbnails, dozie nsogbu ịma jijiji ma bulie ike oriri.
Na Nexus 4 na Nexus 7, a na-edozi mkpọka mgbe ị na-eji atụmatụ thelọ Ntụkwasị Obi na Akaụntụ Ntanetị. Volla Phone fixes mbipụta na akpaka ihuenyo ihie ukpụhọde.
Ihe ọzọ kwesịrị ịrịba ama bụ na agbakwunyere okirikiri nhọrọ ọhụrụ, yana ndozi maka ọrụ amụma amụma anaghị ebugo na laatiboodu-French na Bekee-Dvorak.
N'ikpeazụ, maka ndị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya na-atọhapụ ọhụrụ a femụwe update, ị nwere ike ịga na njikọ ndị a.
Nweta Ubuntu Touch OTA-17
Ejiri melite Ubuntu Touch OTA-17 maka ngwaọrụ ndị a:
BQ E5 HD Ubuntu Mbipụta
BQ E4.5 Ubuntu Mbipụta
Meizu Pro 5 mbipụta Ubuntu
BQ M10 (F) HD Ubuntu Mbipụta
Nexus 7 2013 (Wi-Fi na LTE ụdị)
OnePlus 3 na 3T
Xiaomi Redmi 3s / 3x / 3sp (ala)
Xiaomi Redmi Rịba ama 7
Xiaomi Redmi Rịba ama 7 Pro
Iche iche, na-enweghị mkpado "OTA-17", mmelite ga-akwado maka Pine64 PinePhone na PineTab ngwaọrụ. E jiri ya tụnyere mbipute gara aga, usoro mgbakọ siri ike amalitela maka Xiaomi Redmi Rịba ama 7 Pro yana Xiaomi Redmi 3s / 3x / 3sp ngwaọrụ.
Maka ndị ọrụ Ubuntu Touch dị na ọwa ha ga-enweta mmelite OTA site na ihuenyo mmelite sistemụ nhazi.
Mgbe, inwe ike nweta mmelite ozugbo, naanị mee ka ADB nweta ma gbasoo iwu na 'adb shell':
Na nke a, ngwaọrụ ahụ ga - ebudata mmelite ma wụnye ya. Usoro a nwere ike iwe obere oge, dabere na ọsọ nbudata gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » A tọhapụrụ Ubuntu Touch OTA-17 ma na-aga Ubuntu 20.04
Microsoft chọrọ ịgbatị eBPF site na Linux kernel na Windows